ကလေးတှဟော အမဘေကျက အဖှားဆီကနေ ဗီဇအမြားဆုံး ရရှိတယျလို့ လလေ့ာမှုတဈခုက ဖျောပွ - Chit MayMay
Home Mom and Baby ကလေးတှဟော အမဘေကျက အဖှားဆီကနေ ဗီဇအမြားဆုံး ရရှိတယျလို့ လလေ့ာမှုတဈခုက ဖျောပွ
ကလေးတှဟော အမဘေကျက အဖှားဆီကနေ ဗီဇအမြားဆုံး ရရှိတယျလို့ လလေ့ာမှုတဈခုက ဖျောပွ
ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အမဘေကျက အဘှားတှဟော မွေးဖွဈသူနှငျ့အတူ အထူးဆကျသှယျမှုရှိတယျဆိုတာ ထူးခွားမှု ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ဟာ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ဘဝမှာ စိတျပိုငျးဆိုငျရာကော၊ ဗီဇအဆငျ့မှာပါ အရေးပါသော အခနျးကဏ်ဍမှ ပါဝငျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ အဖှားနှငျ့အတူ အခြိနျတှအေမြားကွီး မဖွုနျးခဲ့ဘူးဆိုရငျတောငျ သငျနဲ့ သငျ့အဘှားကွားက နှောငျကွိုးဟာ ဘယျတော့မှ ညှိုးနှမျးမသှားပါဘူး။ ဒါက သူမရဲ့ စိတျခံစားမှု၊ သူမရဲ့ စိတျနစေိတျထား၊ သူမရဲ့ DNA အမှကွေောငျ့ ဖွဈပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အမဘေကျက အဘှားနဲ့ ကြှနျတျောတို့ဟာ ဘယျလိုနှောငျကွိုးတှရှေိသလဲဆိုတာ နားလညျစဖေို့ ဒီဆောငျးပါးလေးကို ဖတျကွညျ့ရအောငျ။
ခြီလီနိုငျငံသား ဆောငျးပါးရေးဆရာ Alejandro Jodorowskyဟာ မွေးဖွဈသူပျေါမှာ အဖှားရဲ့ မြိုးဗီဇလှမျးမိုးမှုကို ရှငျးပွထားတဲ့ ‘စိတျစှမျးအားနှငျ့ မိသားစုသဈပငျမှတဆငျ့ ကိုယျ့ကိုယျကို ရှာဖှခွေငျး’ Metagenealogy လို့ချေါတဲ့ စာအုပျတဈအုပျကို ရေးခဲ့ပါတယျ။
Alejandro ရဲ့အဆိုအရ အမဗေို့ကျထဲကနေ ကလေးလကျခံရရှိတဲ့ မြိုးဗီဇဟာ သူတို့အဘှားဆီကနေ တိုကျရိုကျလာပါတယျ။ အဘိုးအဘှားမြားနဲ့ ဆှမြေိုးသားခငျြးတှအေကွား အမဘေကျက အဘှားဟာ မြိုးဗီဇအမှအေတှကျ တာဝနျအရှိဆုံးတဈယောကျဖွဈပါတယျ။
မြိုးဗီဇတှဟော တဈယောကျကြျောနိုငျပွီး အမွဲတမျးတော့ နောကျမြိုးဆကျကို တိုကျရိုကျလကျဆငျ့မကမျးပါဘူး။ တခြို့ကလေးတှဟော သူတို့မိဘတှထေကျ သူတို့ရဲ့ အနျတီ၊ ဦးလေးနှငျ့ အဘိုးအဘှားတှနေဲ့ တူတယျဆိုတာ ဖွဈနိုငျခွတေဈခုရှိပါတယျ။
ကလေးတှဟော သူတို့အဘှားနဲ့ အတိအကတြော့ မတူပမေယျ့ သူတို့ရဲ့ မကျြလုံးအရောငျ၊ သူတို့ရဲ့ လမျးလြှောကျတဲ့ အမူအယာ၊ အပွုံး ကအစ သူတို့ပျေါမှာ အမှတျအသားတဈခု အမွဲတမျးရှိပါလိမျ့မယျ။ ဒါ့အပွငျ တခါတရံ မွေးတှဟော သူတို့အဘိုးအဘှားတှဆေီကနေ အရိုးတညျဆောကျပုံ၊ ကွှကျသား သို့ မြိုးရိုးလိုကျရောဂါမြားကိုတောငျ အမှဆေကျခံရပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ DNAမှာ အဘိုအဘှားတှေ DNA ပမျြးမြှ ၂၅ရာခိုငျနှုနျး ပါဝငျပါတယျ။ ကငျးဘရဈတက်ကသိုလျမှ သိပ်ပံပညာရှငျမြားဟာ အမဘေကျက အဘှားနဲ့ သူတို့မွေးအကွား နှောငျကွိုးနှငျ့ပတျသတျပွီး သုတသေနထုတျဝခေဲ့ပါတယျ။ ဒီသုတသေနအရ ဒီခြိတျဆကျမှုဟာ X-chromosome ကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ အမဘေကျက အဘှားတှဟော သူမရဲ့မြိုးဗီဇအမှကေို လကျခံတဲ့ မွေးတှအေားလုံးကို သူတို့ရဲ့ X-chromosomes ၂၅ ရာခိုငျနှုနျး လကျဆငျ့ကမျးတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။
အဖဘေကျက အဘှားတှဟော သူတို့ရဲ့ X-chromosomes ကို မွေးယောကျြားလေး မဟုတျဘဲ မွေးမိနျးကလေးကို လကျဆငျ့ကမျးပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အဖဘေကျက အဘှားဟာ သူတို့မွေးမိနျးကလေးမှ X-ဆကျနှယျမှု 50% ရှိပွီး မွေးယောကျကျြားလေးတှမှော X-ဆကျနှယျမှု 0% ရှိပါတယျ။
မစိုးရိမျပါနဲ့။ ဒါက မွေးတှဟော သူတို့အဖဘေကျက အဘှားနှငျ့ နီးစပျမှုမရှိဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အရေးကွီးဆုံးအရာက မကွာခဏ အဆကျအသှယျရှိဖို့နဲ့ ကလေးတဈယောကျရဲ့ ဘဝမှာ ယဘေုယအြားဖွငျ့ ရှိနဖေို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဂနျြဒါ သို့မဟုတျ မြိုးဗီဇ နှငျ့မသကျဆိုငျဘဲ ခိုငျမာတဲ့ မိသားစုရငျးနှီးမှုကို တညျဆောကျဖို့ မရှိမဖွဈ လိုအပျတဲ့ နှောငျကွိုးကို တိုးတတျစပေါလိမျ့မယျ။
Jodorowsky ရဲ့အဆိုအရ ကလေးတှဟော သူတို့မိခငျဘကျက အဖှားရဲ့ စိတျခံစားမှုအတှအေ့ကွုံမြားကိုလညျး အမှရေရှိပါတယျ။ အမဖွေဈသူ ခံစားရတဲ့ စိတျခံစားမှုမြားက သမီးဖွဈသူ ကိုယျဝနျဆောငျတဲ့အခါ ဒီ information ကDNA မှာမှတျတမျးတငျထားတာကွောငျ့ အနာဂတျမွေးဖွဈသူကို လကျဆငျ့ကမျးနိုငျပါတယျ။ မြိုးဆကျတဈဆကျကို ကြျောသှားရငျတောငျ ကနျြရှိနိုငျပါသေးတယျ။
သငျ့အမဘေကျက အဘှားနဲ့ သငျ့ကွားမှာ ဆငျတူတာကို အမွဲသတိထားမိသလား? ဒါမှမဟုတျ သငျ့ကလေးက သငျ့အမနေဲ့ တူသလား? မှတျခကျြလေးတှေ မြှဝပေေးပါဦးနျော။
ကလေးတွေဟာ အမေဘက်က အဖွားဆီကနေ ဗီဇအများဆုံး ရရှိတယ်လို့ လေ့လာမှုတစ်ခုက ဖော်ပြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမေဘက်က အဘွားတွေဟာ မြေးဖြစ်သူနှင့်အတူ အထူးဆက်သွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတာ ထူးခြားမှု ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘဝမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကော၊ ဗီဇအဆင့်မှာပါ အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အဖွားနှင့်အတူ အချိန်တွေအများကြီး မဖြုန်းခဲ့ဘူးဆိုရင်တောင် သင်နဲ့ သင့်အဘွားကြားက နှောင်ကြိုးဟာ ဘယ်တော့မှ ညှိုးနွမ်းမသွားပါဘူး။ ဒါက သူမရဲ့ စိတ်ခံစားမှု၊ သူမရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား၊ သူမရဲ့ DNA အမွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမေဘက်က အဘွားနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘယ်လိုနှောင်ကြိုးတွေရှိသလဲဆိုတာ နားလည်စေဖို့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်ရအောင်။
ချီလီနိုင်ငံသား ဆောင်းပါးရေးဆရာ Alejandro Jodorowskyဟာ မြေးဖြစ်သူပေါ်မှာ အဖွားရဲ့ မျိုးဗီဇလွှမ်းမိုးမှုကို ရှင်းပြထားတဲ့ ‘စိတ်စွမ်းအားနှင့် မိသားစုသစ်ပင်မှတဆင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှာဖွေခြင်း’ Metagenealogy လို့ခေါ်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ရေးခဲ့ပါတယ်။
Alejandro ရဲ့အဆိုအရ အမေ့ဗိုက်ထဲကနေ ကလေးလက်ခံရရှိတဲ့ မျိုးဗီဇဟာ သူတို့အဘွားဆီကနေ တိုက်ရိုက်လာပါတယ်။ အဘိုးအဘွားများနဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအကြား အမေဘက်က အဘွားဟာ မျိုးဗီဇအမွေအတွက် တာဝန်အရှိဆုံးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
မျိုးဗီဇတွေဟာ တစ်ယောက်ကျော်နိုင်ပြီး အမြဲတမ်းတော့ နောက်မျိုးဆက်ကို တိုက်ရိုက်လက်ဆင့်မကမ်းပါဘူး။ တချို့ကလေးတွေဟာ သူတို့မိဘတွေထက် သူတို့ရဲ့ အန်တီ၊ ဦးလေးနှင့် အဘိုးအဘွားတွေနဲ့ တူတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုရှိပါတယ်။
ကလေးတွေဟာ သူတို့အဘွားနဲ့ အတိအကျတော့ မတူပေမယ့် သူတို့ရဲ့ မျက်လုံးအရောင်၊ သူတို့ရဲ့ လမ်းလျှောက်တဲ့ အမူအယာ၊ အပြုံး ကအစ သူတို့ပေါ်မှာ အမှတ်အသားတစ်ခု အမြဲတမ်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် တခါတရံ မြေးတွေဟာ သူတို့အဘိုးအဘွားတွေဆီကနေ အရိုးတည်ဆောက်ပုံ၊ ကြွက်သား သို့ မျိုးရိုးလိုက်ရောဂါများကိုတောင် အမွေဆက်ခံရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ DNAမှာ အဘိုအဘွားတွေ DNA ပျမ်းမျှ ၂၅ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ပါတယ်။ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှ သိပ္ပံပညာရှင်များဟာ အမေဘက်က အဘွားနဲ့ သူတို့မြေးအကြား နှောင်ကြိုးနှင့်ပတ်သတ်ပြီး သုတေသနထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒီသုတေသနအရ ဒီချိတ်ဆက်မှုဟာ X-chromosome ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အမေဘက်က အဘွားတွေဟာ သူမရဲ့မျိုးဗီဇအမွေကို လက်ခံတဲ့ မြေးတွေအားလုံးကို သူတို့ရဲ့ X-chromosomes ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း လက်ဆင့်ကမ်းတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
အဖေဘက်က အဘွားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ X-chromosomes ကို မြေးယောက်ျားလေး မဟုတ်ဘဲ မြေးမိန်းကလေးကို လက်ဆင့်ကမ်းပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဖေဘက်က အဘွားဟာ သူတို့မြေးမိန်းကလေးမှ X-ဆက်နွယ်မှု 50% ရှိပြီး မြေးယောက်က်ျားလေးတွေမှာ X-ဆက်နွယ်မှု 0% ရှိပါတယ်။
မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ဒါက မြေးတွေဟာ သူတို့အဖေဘက်က အဘွားနှင့် နီးစပ်မှုမရှိဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အရေးကြီးဆုံးအရာက မကြာခဏ အဆက်အသွယ်ရှိဖို့နဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် ရှိနေဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျန်ဒါ သို့မဟုတ် မျိုးဗီဇ နှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ ခိုင်မာတဲ့ မိသားစုရင်းနှီးမှုကို တည်ဆောက်ဖို့ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ နှောင်ကြိုးကို တိုးတတ်စေပါလိမ့်မယ်။
Jodorowsky ရဲ့အဆိုအရ ကလေးတွေဟာ သူတို့မိခင်ဘက်က အဖွားရဲ့ စိတ်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံများကိုလည်း အမွေရရှိပါတယ်။ အမေဖြစ်သူ ခံစားရတဲ့ စိတ်ခံစားမှုများက သမီးဖြစ်သူ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အခါ ဒီ information ကDNA မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာကြောင့် အနာဂတ်မြေးဖြစ်သူကို လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ပါတယ်။ မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကို ကျော်သွားရင်တောင် ကျန်ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။
သင့်အမေဘက်က အဘွားနဲ့ သင့်ကြားမှာ ဆင်တူတာကို အမြဲသတိထားမိသလား? ဒါမှမဟုတ် သင့်ကလေးက သင့်အမေနဲ့ တူသလား? မှတ်ချက်လေးတွေ မျှဝေပေးပါဦးနော်။
Previous articleကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ ဘာတှရှေောငျရှားသငျ့သလဲ?
Next articleကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး ရှောငျကွညျရမယျ့ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာလှုပျရှားမှုမြား